Ku simaha madaxweynaha oo kormeer ku tagay dugsiga tababarka Jeneraal Kaahiye - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)- Guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan ahna ku simaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta booqday dugsiga tababarka Jeneraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho.
Ku simaha madaxweynaha iyo taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen Maxamed iyo saraakiil kale ayaa salaam sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya.
Kormeerkan ayaa hadafkiisu ahaa sidii guddoomiyaha golaha shacabka u dhiiri gelin lahaa ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya oo tababar uga socdo dugsiga tababarka generaal Kaahiye.
Taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliya generaal Zakiya Xuseen Maxamed ayaa sheegtay in kormeerkan uu dhiri gelin u yahay ciidamada booliska.
“Baarlamanka waa halka ay ka bilaabto dowladnimada, booliska waa halka ay dowladnimada ka fuliso, waxaan diyaar u nahay inaan kaalinteena ka qaadano horumarka dalka, waan ku faraxsanahay kormeerkeena” ayay tiri taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliya.
Guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in ciidamada booliska ay yihiin indhaha sharciga.
“Ciidamada booliska Soomaaliyeed waa indhaha sharciga, ciidamada booliska Soomaaliyeed waa gacmaha sharciga, waxaan aaminsanahay in ciidamada booliska ay go’an doonaan fulinta go’aannada ay gaaran garsoorka, waan ku amanaaya”ayuu yiri guddoomiyaha golaha shacabka.
Taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa dadaal ugu jira sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta ciidamada iyadoo tababar arintaasi ku saabsan ay ka socdan magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka.